Thu, May 28, 2020 at 3:40am
सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा सुदूरपश्चिम: बुधवार मात्रै गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकाबाट ६ हजार बढी नेपाली भित्रिए #आहा खबर# नेपाल पुन: कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहने सीसीएमसीकाे संकेत #आहा खबर# अर्थमन्त्री खतिवडाद्वारा संसद्मा आज बजेट प्रस्तुत हुँदै #आहा खबर# ६ जेठका लागि तय भएको प्रधानमन्त्रीस्तरीय टेलिफोन वार्ता मोदीद्वारा अस्वीकार #आहा खबर# सुर्खेतमा २४ घण्टामै थपिए १५ सङ्क्रमित #आहा खबर# राष्ट्रपतिले दिए २३३ कैदीलाई माफी #आहा खबर# चीनद्वारा भारतसँगकाे सीमा विवादमा मध्यस्थता गर्ने ट्रम्पको प्रस्ताव अस्वीकार #आहा खबर# राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा १३औँ गणतन्त्र दिवसको शुभकामना #आहा खबर# दाङका १८ जना कोरोना संक्रमित भारतबाट फर्किएका व्यक्ति #आहा खबर# उपत्यकामा अझै लुकीछिपी भित्रिन्छन् मानिस #आहा खबर# रुकुम हत्या प्रकरण: भेरी नदीमै भेटियो चौथो शव #आहा खबर# ट्विटरले लगायाे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको ट्विटमा चेतावनी चिह्न #आहा खबर# प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीबाट हटाइयाे संविधान संशोधन विधेयक #आहा खबर# भारतबाट रौतहट आएका थप ३५ जनामा देखियो कोरोना संक्रमण #आहा खबर# सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलसनमा राखिएका १ जनाको मृत्यु #आहा खबर#
पोखरा, १३ चैत । १२ दिनअघि भारतबाट फर्किएर कास्कीको रुपा गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेका एक जनाको मृत्यु भएको छ । रुपा गाउँपालिकाका ५० वर्षीय विश्ववन्धु नेपालीको बुधबार दिउँसो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको हो । नेपालीलाई मंगलबारदेखि रुपा गाउँपालिकाले तयार पारेको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । भारतको हैदरावादबाट फर्किएका उनी बुधबार बिहान खाना खाएर सुतेका थिए । अबेरसम्म पनि नउठेपछि नेपालीलाई पोखरा..
चितवन, ११ चैत। चितवनकाे भरतपुरस्थित कोरोना विषेश अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएका एक युवकको मृत्यु भएकाे छ । अस्पतालका अनुसार उनकाे मृत्यु मंगलबार विहान ७ बजे उपचारका क्रममा भएकाे हाे । उच्च ज्वरो र रुघाखोकीले ग्रसित बनेका वीरगञ्जका ३० बर्षका युवकको मृत्यु भएको हो । उनको शव अस्पतालमै राखिएको छ । उनलाई चितवन मेडिकल कलेजबाट रिफर गरेर केही दिन अघि कोरोना बिषेश अस्पतालमा पठाइएको थियो । उनीलाई कोरोना..
चितवन, ११ चैत । सरकारले अतिआवश्यक काम बाहेक ननिस्किन आग्रह गरी लकडाउनकाे घाेषणा गरेपनि सर्वसाधरणले साे कुरा पूर्ण रूपमा लागु गरेका छैनन् । घरबाहिर जथाभावी ननिस्कन गरेको आग्रहलाई उलंघन गरी हिडेका १० जनालाई चितवन प्रहरीले पक्राउ गरेकाे हाे। चितवनको विभिन्न ठाउँबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको चितवनका एसपी नान्तीराज गुरूङले बताए । उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कारबाहीका लागि उपस्थित गराइने भएकाे छ । एसपी गुरूङले भने, ‘जथाभावी सडकमा..
धनगढी, ११ चैत । कैलालीकाे धनगढीस्थित नेपाल भारत सीमा नाका गौरीफण्टामा भारतबाट नेपाल फर्किरहेका नेपालीहरुलाई प्ररीले रोक्न खाजेपछि झडप भएकाे छ। ठूलो संख्यामा भारतबाट आएका नेपालीहरुले नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका थिए । तर उनीहरुलाई प्रहरीले सीमामै रोक्न खोजेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको हाे । झडपमा परी केही प्रहरी सामान्य घाइते भएका छन् । सरकारले मुलुकभर मांगलबार बिहान देखि ‘लकडाउन’ गरेको छ । यसैबेला भारतका विभिन्न..
कैलाली, १० चैत । साेमबारदेखि कैलालीमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा 'कर्फ्यु' जारी गरिएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि कर्फ्यु जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । बिहानैदेखि कैलालीमा बजार बन्द छन् । अहिले विभिन्न ठाउँमा माइकिङ्ग भइरहेको छ । कैलालीमा गाडी चल्न पनि दिइएको छैन । कैलालीमा नाकाबाट सर्वसाधारण भित्रन सक्ने भएकाले कर्फ्यु लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।..
काठमाडौं, १० चैत । प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 'नेकपा' का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’का दाई पक्राउ परेका छन् । विप्लवका दाई चयन्द्र चन्दसहित ६ जनालाई आइतवार राति ललितपुर प्रहरीले पक्राउ परेकाे हाे । उनी जावलाखेलबाटै पक्राउ परेकाे प्रहरीले जनाएकाे छ । चन्द नेपाल गणतान्त्रिक खेलकुद महासंघका अध्यक्ष समेत हुन् ।..
काठमाडौं, १० चैत । काेराेना भाइरसकाे संक्रमणबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या १४ हजार ६ सय ८७ पुगेकाे छ । कोरोनाकाे संक्रमणा विश्वको १ सय ८६ भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ । पछिल्लो समय कोरोनाबाट मर्नेको संख्या चीनमा भन्दा इटली धेरै रहेको छ । इटालीमा आइतबार मात्रै ६ सय ५१ जनाको मृत्यु भएर अहिलेसम्म ५ हजार ४ सय ७६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यस्तै चीनको हुबेई..
काठमाडाैं, ९ चैत । कीर्तिपुरका तीन वटा औषधि पसलमा तालाबन्दी गरिएकाे छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले बजार अनुगमनका क्रममा तीन औषधि पसलमा तालाबन्दी गरेको हाे। तीनवटा वडामा गरेको अनुगमनका क्रममा नगरपालिकाले तीन औषधि पसल तालाबन्दि र एक मिठाइ पसलबाट ३० वटा ग्यास सिलिन्डर बरामद गरेको हो। मिति सकिएको औषधिहरू राखिएका र लाइसेन्स प्राप्त फार्मेसिस्ट नबसी अरू नै मानिस बसेका कारण तालाबन्दी गराएको नगरपालिकाका उपप्रमुख सरस्वती खड्काले..
कैलाली, ९ चैत । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४, फुलबस्तीमा बिस्फोट हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ४० वर्षीय नरबहादुर विक रहेका छन् । विकले घर नजिकै भेटेको फलाम जस्तो वस्तुलाई चलाउन खोज्दा पड्किएर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ..
काठमाडौं, ७ चैत। काठमाडौँमा शुक्रबार बिहान भूकम्पकाे धक्का महशुस भएकाे छ । बिहान ७ बजेर २० मिनेट जाँदा भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो । चीनको तिव्बतबाट २० किलोमिटर टाढा सीजाङमा गएको ६.२ रेक्टर स्केलको भूकम्पको धक्का नेपालसम्म महसुस भएको बताइएको छ । यसको केन्द्रविन्दु काठमाडौँ भन्न्दा १८७ किलोमिटर उत्तरपूर्व रहेको थियो । यसको असर भारत,नेपाल, भुटान र बंगालादेश रहेको बताइएको छ..
काठमाडौं, ५ चैत । काठमाडौंमा रोकेर राखिएको ट्रकभित्र लगेर १७ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ । काठमाडौंको चन्द्रगिरी नगरपालिका–१५ तीनथानाकाे सडक किनारामा रोकेर राखिएको ना ३ ख ६९४ नम्बरको ट्रकमा १७ वर्षीया किशोरीमाथि ३ जना युवकले सामूहिक रुपमा बलात्कार गरेका हुन् । महानगरीय प्रहरी बृत्त थानकोटका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक 'डीएसपी' घनश्याम श्रेष्ठका अनुसार सामूहिक बलात्कारमा संलग्न ३ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा दाङको राप्ती..
काठमाडाैं,४ चैत। काभ्रेको पनौती तनावग्रस्त बनेको छ। बा५ख ५४८० नम्बरको टिपरको ठक्करबाट जुनीमाया गोले र उनकी तीन वर्षिया छोरी स्मारिकाको मृत्यु भएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको हो। घटनापछि स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेका छन् । चालकसहित टिपर नियन्त्रणमा लिँदा पनि स्थानीयले सडकमा अवरोध कायम राखेपछि प्रहरीले ११ राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्र तिमल्सिनाका अनुसार स्थिति साम्य..
काठमाडौं, ३ चैत । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना ९कोभिड–१९० भाइरसको संक्रमण फैलिइरहेका बेला सहयोग र सद्भाव दर्शाउनुको सट्टा बजारमा कालोबजारी फैलाउनेविरुद्ध सरकार कडा रुपमा उत्रिन थालेको छ । कोरोना भाइरसको त्रासका बेला मौका छोपेर व्यवसायमा कालोबजारी नगर्न गरिएको पटक–पटकको आग्रहलाई व्यापारीहरुले बेवास्ता गर्दै कालोबजारीलाई निरन्तरता दिइरहेको पाइएपछि सरकार कडा रुपमा उत्रिएको हो । प्रहरीले काठमाडौंको सतुंगलबाट ८ लाख ४९ हजार ६ सय थान..
काठमाडौं, ३० फागुन । बलात्कारकाे मुद्दामा मुछिएका अनेरास्ववियुका नेता इन्द्रहाङ राईलाई साढे ८ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका निलम्बित केन्द्रीय सदस्य राईलाई बलात्कार मुद्दामा साढे ८ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरिएको हाे । जिल्ला अदालत काठमाडौंले राईविरुद्ध दायर मुद्दामा सजाय सुनाउँदै यस्तो आदेश गरेको हो । त्यस्तै, राईबाट पीडितलाई क्षतीपूर्तिबापत डेढ लाख रुपैयाँ..
गोलकुल बाँस्कोटाको निर्माणाधीन घरमा बम विष्फोट
काठमाडौं, २८ फागुन । बिहीबार बिहान भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोलकुल बाँस्कोटाको निर्माणाधीन घरमा बम विष्फोट भएको छ। भक्तपुरको लोकन्थलीमा निर्माणाधीनउनको घरमा बम विष्फोट भएको जिल्ला प्रहरीका भक्तपुरले जानकारी दिएको छ । प्रहरीका अनुसार घर पछाडिको भागमा बम विष्फोट गराइएको छ। विष्फोटबाट मानवीय क्षति नभए पनि घरका पर्खालहरु भत्किएको छ । बम विप्लप नेतृत्वको पार्टीले गरेको हुनसक्ने अनुमान रहेपनि हालै..
आज उपत्यकाका ७६ स्थानमा चेकिङ, १४ मोबाइल भ्यानहरूले गस्ती दिने
काठमाडाैं, २६ फागुन । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले होली पर्वलाई दुर्घटनारहित र सुरक्षित बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा होली विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। राजधानीको अधिकांश चोक, गल्ली तथा सडकमा सुरक्षा जाँच कडा पारिने महाशाखाले जनाएको छ। उपत्यकाका ७६ स्थानमा चेकिङ प्वाइन्ट र १४ वटा मोबाइल भ्यानहरूले गस्ती तथा मोाबाइल चेकिङ गरिने महाशाखा प्रमुख भीम प्रसाद ढकालले जानकारी दिए। ‘मुख्यतय उपत्यकामा दुर्घटना कम गर्ने..
धनगढीबाट दार्चुला हिडेको जिप दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु, ६ गम्भीर घाइते
बैतडी, २५ फागुन । धनगढीबाट दार्चुला जाँदै गरेको जिप दुर्घटना हुँदा चालककाे मृत्यु् भएकाे छ भने ६ जना घाइते भएका छन् । धनगढीबाट दार्चुलाका लागि हिडेकाे १२५७ नंको जिप दशरथचन्द राजमार्गअन्तर्गत बैतडीको पाटनमा दुर्घटनाग्रस्त भएकाे हाे बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेयले भटनाको पुष्टि गर्दै जिप चालक दार्चुलाको दुहु गाउँपालिकाका ३५ वर्षीय धनसिंह बडालको मृत्यु भएको जानकारी दिए । दुर्घटनामा ६ जना घाइते..
काठमाडौं, २५ फागुन । २०६४ असोज १८ मा हत्या भएका एभिन्युज टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकार वीरेन्द्र साहका हत्यारा पक्राउ परेका छन् । तत्कालीन माओवादीमा संलग्न कुन्दन भन्ने नरेन्द्र चौधरीलाई आइतबार बिहानै निवासबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनलाई निवासबाटै बिहान २ बजे पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ गर्ने क्रममा अवरोध सिर्जना भएपछि ४ राउन्ड हवाई फायर गर्नुपरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले बारागढीस्थित निवासमा..
काेराेनाभाइरसकाे संक्रमणबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या ३५ सय नाघ्याे, कुन देशमा कति ?
काठमाडौं, २५ फागुन । कोरोना भाइरसकाे संक्रमणबाट विश्वका विभिन्न मुलुकमा अहिलेसम्म ३५ सय बढीको मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी चीनमा रहेका छन् । चीनमा अहिलेसम्म ३ हजार ७० जनाको मृत्यु भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । चीनमा शनिबार मात्रै २७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४१ जना नयाँ संक्रमित फेला परेको पिपुल्स डेली चाइनाले जनाएको छ । शनिबारमात्रै चीनमा १ हजार ५..
परीक्षामा राम्रो अंक नल्याएकाे भन्दै विद्यार्थीकाे हात चिर्ने शिक्षिकालाई जागिरबाट निस्काशन
काठमाडाैं, २४ फागुन । परीक्षामा राम्रो अंक नल्याएकाे भन्दै काठमाडौंको जडीबुटीस्थित जागृति एकेडेमीकी शिक्षिकाले ३४ विद्यार्थीको हात ब्लेडले चिर्न लगाएकी छिन् । १२ वर्षदेखि सोसल साइन्स पढाउँदै आएकी शिक्षिका सीतालक्ष्मी कर्माचार्यले गत साता ६ र ७ कक्षाका विद्यार्थीको कक्षा परीक्षा लिएकी थिइन् । राम्रो नम्बर नल्याउनेको हात चिरिदिने भन्दै उनले परीक्षाकै वेला धम्की दिएकी थिइन् । धम्कीअनुसार नै उनले राम्रो नम्बर ल्याउन..
काठमाडौं, २४ फागुन । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएकाे काेराेना भाइरसलाई कारण देखाउँदै लोबजारी गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेकाे छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवा न्यूरोडबाट खटिएको प्रहरी टोलीले विश्वमा फैलँदै गएको कोरोना भाइरसको मौका छोपेर ह्याण्ड स्यानेटाइजर कालोबजारी गरी बेच्ने प्रिया ट्रेडर्सका अनिल गुप्तालाई शुक्रबार साँझ पक्राउ गरेको हो । भारत घर भएका गुप्ताले काठमाडौँ महानगरपालिका–२५ बाङ्गेमुडामा पसल राखेर सामान कालोबजारी गर्दै आएको आरोप..
नुवाकोट, २३ फागुन । नुवाकोटमा नवविवाहित युवतीले मध्यराति त्रिशूलीमा ‘हामफाले’पछि उनका श्रीमान्लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर १, ढुंगेबजारस्थित चारतले घरको बरन्डाबाट नवविवाहित २१ वर्षिया सञ्जु खातीले बुधबार मध्यराति त्रिशूली नदीमा हामफालेकी हुन्। नुवाकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अविनारायण काफ्लेका अनुसार त्रिशूलीको बगरमा भेटिएकी सञ्जुलाई तत्कालै जिल्ला अस्पताल 'त्रिशूली' लगिएकामा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। नदीसँगै टाँसिएको घर हुनाले सञ्जु..
काठमाडाैं, २० फागुन । चिनियाँ नागरिकको साथमा आवश्यक कागज पत्र नभेटिएपछि नियन्त्रणमा लिइएका चिनियाँ कामदारलाई काठमाडौं ल्याइएको छ। माथिल्लो बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा काम गरिरहेका आठ जना चिनियाँ कामदारलाई गोरखाबाट काठमाडौं ल्याइएको हाे । नौलो नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीले काम गर्न उनीहरूलाई नेपाल ल्याएको थियो।आरूघाट गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थित सोतीबाट सोमबार नियन्त्रणमा लिइएका आठै जनालाई काठमाडौं पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए। चिनियाँलाई सोमबार नियन्त्रणमा लिइएको..
काेराेना भाइरसकाे संक्रमणबाट अमेरिकामा थप ४ जनाकाे मृत्यु
अमेरिका, २० फागुन । अमेरिकामा काेराेना भाइरसकाे संक्रमणबाट थप ४ जनाकाे ज्यान गएकाे छ । अमेरिकाको वासिङ्टन राज्यमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट थप चार जनाको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुगेको हाे। साताको अन्त्यतीर वासिङ्टन राज्यले राज्यमा कोरना संक्रमण देखिएपछि आपतकालको घोषणा गरेको थियो। यसैगरी राज्यले आफ्नो क्षेत्रमा १८ वटा कोरोनाभाइरसको संक्रमणको मामिला पुष्टि भएको बताएको छ। कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका पहिलो दुई व्यक्तिको अध्ययन गरेका..
शनिबार, फागुन १७, २०७६ साल
भक्तपुर, १७फागुन प्रहरीले भक्तपुरका विभिन्न होटल, रेष्टुरेण्ट तथा खाजाघरबाट यौन गतिविधिमा संलग्न रहेकाे अभियोगमा प्रहरीले शनिबार छापा मारेर १६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीको टोलीले पिसफुल, प्याराडाइज, कस्तुरी खाजाघर, ए-वान र थकाली खानाघरमा एकैपटक छापा मारी अनैतिक कार्य गर्दै गरेको अवस्थामा आठ पुरुष र आठ महिलालाई पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीका प्रहरी नायव उपरीक्षक चक्रराज जोशीले जानकारी..
काठमाडौँ, ७ फागुन जलस्रोत तथा सिंचाई बिकास डिभिजन कार्यालय, पाटन, बैतडीमा कार्यरत निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर सुरेश राज भट्ट घुससहित पक्राउ परेका छन् । चमेलिया खोला तटबन्ध नियन्त्रण निर्माण योजनाको कामको सम्झौता गर्न आलटाल तथा ढिलासुस्ती गरी घुस मागेको उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुरबाट खटिएको टोलीले भट्टलाई पक्राउ गरेको हो । उनलाई घुस बापतको रकम १ लाख र स्रोत नखुलेको..
ललितपुर, ३ फागुन महानगरीय प्रहरीवृत्त सातदोबाटोले विभिन्न स्थानमा जुवातास खेलिरहेका ११ जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १४ नखीपोटमा रहेको सुरज बस्नेतकोे घरको दोस्रो तलाबाट जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले उनीहरुलाई आज नियन्त्रणमा लिएको हो। पाँचथर अमरपुर वडा नं २ घर भएका कृष्णकुमारी लिम्बूले घर भाडामा लिइ जुवातास खेलाइरहेको जनाइएको छ। पक्राउ पर्ने लिम्बुसहित प्रभुराज राई, इन्टर राई, ज्ञानेन्द्र हुमागाईं, विजय..
काठमाडाैं, ३ फागुन । नेपाल आउने क्रममा उडिरहेकाे विमाभित्र बेहाेस हुँदा एक नेपाली यात्रुकाे मृत्यु भएकाे छ । हङकहङबाट नेपाल वायुसेवाको जहाजमा काठमाडौंका लागि उड्दै गर्दा आकाशमै अचानक बेहोस भएका खोटाङका डिकप्रसाद राईको मृत्यु भएको हाे। नेपाल वायुसेवाको आरए ४१० विमानमा गत मंगलबार काठमाडौं उड्ने क्रममा मस्तिष्काघात भएर बेहोस भएका ४९ वर्षीय राईको उपपचारका क्रममा शुक्रबार राति मृत्यु भएको हो। हङकङको प्रिन्स मार्गरेट अस्पतालको..
काठमाडौं, २ फागुन आफ्नै घरमा हत्या गरिएकी पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको मृत्यु घाँटीमा कसिएको डोरीको कारण भएको खुलेको छ । शुक्रबार आएको शवपरीक्षण प्रतिवेदनको नतिजाअनुसार उनको मृत्यु घाँटीमा बाँधिएको डोरीका कारण भएको हो । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले घरमा काम गर्ने युवक विजय चौधरीले पिर्काले हानेर मारेको देखिएको थियो । तर पिर्काले हानेर घाइते मात्र भएको र पछि डोरीले घाँटी कसेर मारेको पोस्टमार्टम..
सिन्धुली, २ फागुन । सिन्धुलीमा कार्यरत एक प्रहरी जवानले आफैँलाई गोली प्रहार गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा कार्यरत प्रहरी जवानले आफ्नै पेटमा गाेली प्रहार गरेका हुन् । महोत्तरी घर भई जिप्रकामा कार्यरत प्रहरी जवान चन्द्रकिशोर रायले आफैँलाई पेटमा गोली हानि गम्भीर घाइते भएकाे प्रहरी उपरीक्षक रञ्जु सिग्देलले बताए । उनले घाइते रायको सिन्धुली अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको..
Results 1919: You are at page3of 64